Jilaa aktar caan ah filimada India iyo Raysala wasaraha Pakistan oo Kawada qaybgalaya Daawashada cayaar xasaasi ah oo ka Dhacaysa Ingiriiska
Saif Ali Khan waxaa lagu qeexay inuu yahay jilaaga 4-aad ee dhaqaalaha ugu badan ka sameeya jilista filimada Bollywood-ka, marka laga soot ago Aamir Khan, Shah Rukh Khan, iyo Salman Khan.
Aabihiis waxaa lagu magacaabaa Mansoor Ali Khan Pataudi, wuxuuna ahaa kabtankii hore ee xulka qaranka ciyaaraha Cricket-ka ee dalka Hindiya.
Hadda waxa uu Khan ku sugan yahay magaalada Manchester ee dalka Ingiriiska, halkaasoo ay ka dhaceyso ciyaarta xiisaha badan ee Cricket-ka, oo ay ku wada kulmi doonaan kooxaha kasoo kala jeeda waddamada cadowga isku ah ee Hindiya iyo Pakistan.
Waxa uu ka mid yahay kumannaan taageerayaasha Hindiya ah oo halkaas u tagay si ay u dhiirri galiyaan xulka qaranka.
Isaga waxay u leedahay xiiso gaar ah, maadaama uu aabihiis muddo dheer kabtan u ahaa kooxda Hibdiya, oo lagu yaqaanno inay ka mid yihiin xulalka ugu adage e ciyaaraha Cricket-ka.
“Waligeedka tartanka labada kooxood wuxuu ahaa mid aad u xiiso badan, mar walbana ciyaartoodu waa mid weyn, anigana waxaan aaminsanahay in tani ay tahay ciyaarta Cricket-ka ee ugu weyn caalamka”, ayuu yidhi Sayf, mar uu saxaafadda kula hadlayay magaalada London.
Waxa uu ciyaartoyda iyo taageerayaashaba ugu baaqay inay ciyaarta ku wajahaan xushmad iyo dadaal dhammeystiran.
Dhinaca kale, Ra’iisul wasaaraha hadda talada haya ee dalka Pakistan Cimraan Khan ayaa horay u ahaa xiddigga xulka qaranka ciyaaraha Cricket-ka ee Pakistan, waxa uuna kooxdiisa hoggaaminayay markii ay ku guuleysanayeen koobka adduunka ee tartankan, kaasoo ay markaas kaliya ay qaadeen.
Hindiya iyo Pakistan ayaa lagu yaqaannaa inay col ku yihiin dhinaca Diblomaasiyadda, ciyaarta dhex mareysa labadooda kooxood ayaana xiiso gaar ah u leh dunida.
Labada dal ayaa horay u dagaallamay, waxayna xiisaddooda salka ku heysaa muranka lahaandhaha gobolka Kashmiir, oo mid waliba uu milkiyaddiisa sheeganayo.